Yan Aung: ရွက်လွှင့်နေဆဲ ဘ၀တစ်ခု…
ကိုရန်အောင်ရေ .. အမြဲ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ပါစေ ... :)
မွေးနေ့တိုင်းမှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ.. ရန်အောင်
Hlaing Wai Wai Yan said...
အောင်မြင်ပျော်ရွှင်သော ဘ၀တစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်ပါစေ။
My dear, Yan Yan
Happy Birthday naw!
Sorry for belated wish.
Wish you all the best for Year 2008 :)
နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ချစ်သောသူများနှင့် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဖြတ်သမ်းနိုင်ပါစေ။
Happy birthday ko yan aung..
မွေးနေ့ မှစလို့ နောင်နှစ်များစွာတိုင် ..
ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်နိူင်ပါစေဗျာ ...။
ကိုရန် လဲ ဆောင်းတွင်းဖွားပဲနော်...။ ကိုရန် အေးချမ်းပါစေ...ပျော်ရွှင်ပါစေ... အောင်မြင်ပါစေ (အရာခပ်သိမ်းပါပဲ...) ....။
Happy Birthday! Ko Yan Aung.
Hi HAPPY BIRTHDAY Ko Yan Aung
"This is 10 percent luck, 20 percent skill
၁၃ ကြိမ်မြောက် ဆုတောင်းခြင်းခံရတဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေါ့နော်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ ကျော်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်လို့ နောင် တစ်သက်လုံး ဖြူစင်ဆုံး စိတ်နှလုံးနဲ့ စိတ်ချမ်းသာခြင်းသုခ ခံစားရပေါစေ။
ဟေးးးး ကိုရန်အောင် ပျော်ရွှင်ပါစေ။
ဂျီတော့ကနေ မွေးနေ့ဆုတောင်း ပို့ထားသေးတယ်ရှင့် ။ မေးလ်ဝင်မစစ် လို့ မတွေ့ဘူး ထင်ပါရဲ့ နော်…။
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ မွေးနေ့ပေါင်းများစွာကို နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာထိ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ....
စိတ်ကိုလဲ အမြဲတမ်း ဖြေလျောထားနိုင်ပါစေ....
အရာအားလုံးကို ငြင်သာစွာ ကျော်လွှားသွားနိုင်ပါစေ...
အားဘူးဗျာ ဟတ် ဟတ် ဟတ်
Quartz Bone said...